अर्जेन्टिनालाई उपविजेता मात्र हुने छुट छैन : मेसि – tvNEPALI
Posted on २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:३६ June 6, 2018
दिनपछि सुरु हुन लागेको विश्वकप फुटबलका फ्यान नेपालमा कम छैनन् । खासगरी अर्जेन्टिना र लियोनल मेस्सीका फ्यान नेपालमा धेरै छन् । मेस्सीलाई सधैँ लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो, क्लबका लागि उनले धेरै राम्रो खेले, धेरै उपाधि दिलाए । तर, देशका लागि भने केही गर्न सकेनन् । केही अर्जेन्टेनीले सानैदेखि स्पेनमा हुर्केकाले मेस्सीलाई देशप्रति माया नभएकोसम्म आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सन् २०१४ को विश्वकप फाइनलमा जर्मनीसँग १–० ले पराजित हुँदा पनि उनीमाथि त्यही आरोप दोहोरियो । त्यसको केही अघि मात्रै कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पराजित भएका स्मरण अर्जेन्टेनीहरूको मस्तिष्कमा ताजै थियो । विश्वकपको फाइनलमा समेत पराजित भएपछि फेरि मेस्सीमाथि देशद्रोहीका नारा घन्कियो । ठाउँमा ठाउँमा उनको पुत्ला दहन भयो ।
यद्यपि विश्वकपमा मेस्सीले सक्दो प्रयास गरेका थिए । त्यसैकारण गोल्डन बल समेत जिते । तर, पुरस्कार लिन जादा मेस्सीका अनुहारमा कुनै चमक थिएन । निरास मुद्रामा उनले पुरस्कार लिए र केही दिनमै अन्तरार्ष्िट्रय फुटबलबाट शन्यास घोषणा समेत गरे । तर, त्यसबेला अर्जेन्टेनी सरकार, प्रशिक्षक तथा शुभचिन्तकको व्यापक अनुरोधपछि उनी सन्यासबारे पुनस्विचार गर्न बाध्य भए ।
विश्वकप २०१८ को छनौटमा अर्जेन्टिना धर्मराएको स्थितिमा देखियो । गर या मरको स्थितिमा पुगेको अर्जेन्टिनालाई इक्वेडरविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गर्दै मेस्सीले विश्वकपमा पुन आफ्नो भूमिका सावित गरे । ३० वर्षे मेस्सीका लागि सायद रुस विश्वकप देश र आफ्नो नाममा विश्वकपको उपाधि चुम्ने अन्तिम अवसर हो । विश्वकपको अन्तिम तयारीमा रहेका मेस्सीसँग यो विश्वकपमा अर्जेन्टिना र मेस्सीको सपनाबारेको गरिएको अन्तरवार्ताको भावानुवाद ।
के २०१४ मा उपविजेता बन्दाको पीडा अझैसम्म पनि बाँकी छ ?
हाम्रा लागि त्यो एउटा खुला घाउ थियो जुन अहिलेसम्म पनि दुखिरहेको छ । हामी हाम्रो सपना पूरा गर्ने अन्तिम अवस्थामा थियौं । तर, यो फुटबल हो । उत्कृष्ट टोलीले पनि सधैँ जित्छ भन्ने हुदैँन । हामीले नतिजा स्वीकार्नु पर्छ र अघि बढ्नुपर्छ । त्यो विश्वकप उपाधि जो हाम्रो होस् भन्ने चाहान्थे उनीहरू सबै रोए । म रोएँ, सबै अर्जे्न्टिनी रोए । त्यो पिडा अझैँ ताजै छ ।
अर्को विश्वकप नजिकै आइसक्यो । फेरि तपाईमाथि धेरै अपेक्षाहरू छन् । ती अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न कतिको तयार हुनुहुन्छ ?
यसअघि पनि हामीले आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गरेका थियौं । तर, हामीले अर्जेन्टिनालाई केही दिन सकेनौं । सन् १९८६ यता विश्वकप जित्न नसकेपछि हामीमाथि अपेक्षाहरू थुप्रिनु स्वभाविक हो । अन्य अर्जेन्टेनी झै म पनि विश्वकप जित्दाको त्यो चरम खुशीको आनन्द महसुस गर्न चाहान्छु । सन् २०१४ मा प्रत्येक सदस्यले आफ्नो शतप्रतिशत प्रयास गरेका थिए तर पनि हामी उपाधि जित्नबाट चुक्यौं ।
के अर्जेन्टिनाले २०१८ मा उपाधि जित्न सक्ला ?
मेरो सपना पनि हामीले विश्वकप जितौं भन्ने छ । फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नु र फाइनल खेल्नु निकै कठिन हुन्छ । जुन हामीले २०१४ मा अनुभव पनि गरिसकेका छौं । अहिले पनि फाइनल सम्मको यात्रा २०१४ को जस्तै गर्ने हाम्रो सोच छ । तर फाइनलको नतिजा भने बदल्न चाहान्छौं । हामी यसपटक विश्वकप उचाल्न चाहान्छौं । यो हाम्रो पुस्ताका लागि यो अन्तिम अवसर पनि हो ।
अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि दिलाउ नै पर्ने बाध्यताको बोझले तपाई थिचिनुभएको त छैन ?
छैन्, साच्चै छैन् । यदि तपाई अर्जेन्टेनी हुनुहुन्थ्यो र फुटबल पछ्याउनुहुन्थयो भने तपाई पनि तपाईको देशले विश्वकप उचालोस् भन्ने चाहानुहुन्थ्यो । त्यसमा कुनै अन्यथा छैन् । तर हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वकप जित्नु कति चुनौतीपूर्ण र कठिन हुन्छ । तर पनि हामी जित्न चाहान्छौं । अर्जेन्टिना जित्न चाहन्छ । त्यसैले ममाथि अर्जेन्टेनीले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
अर्जेन्टिनाले कुनै खेल हार्दा त्यहाँका मिडियाबाट तपाईको खुब आलोचना हुने गर्छ । त्यो तपाईका लागि कति पीडादायी क्षण हुन्छ ?
अवश्य पनि त्यसले पीडा दिन्छ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू(मिडिया)ले पनि हामिले विश्वकप नदिलाएको जुन हामीले सञ्चार गरेका हुन् । अर्जेन्टिना फुटबलको राम्रो माहोल भएको राष्ट्र हो । त्यहीकारण मिडियाको त्यो प्रतिक्रिया सामान्य हो । कहिलेकाहीँ मिडियाले त्यस्तो गर्दा हामीले विश्वकपको फाइनलसम्म पुग्न लगाएको सामथ्र्य बेकार थियो झै लाग्छ । तर अर्जेन्टिना भनेकै त्यही हो, जहाँ उपविजेतालाई कुनै स्थान छैन ।
अर्जेन्टिना अप्ठारो समूहमा छ । तपाईका समूहमा रहेका आइसल्याण्ड, क्रोएसिया र नाइजेरियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रतियोगिताका उत्कृष्ट टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हामीले पनि उत्कृष्ट खेल पस्कनै पर्छ । सबै प्रतिद्वन्द्वीहरू तपाइलाई कडा प्रश्न सोध्न तयार छन् तपाईले पनि त्यसको गतिलो जवाफ दिन सम्पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । त्यही भएर यो विश्वकप हो । यहाँ केही पनि उपहारमा पाइँदैन् । उत्कृष्टहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छन् । समूहका देशसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हामी त्यसका लागि तयार छौं ।
तपाईका नजरमा प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्न सक्ने राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् ?
फुटबल सबै ठूला राष्ट्रहरू उपाधि उचाल्न उत्तिकै सक्षम छन् । अघिल्लो संस्करणको च्याम्पियन जर्मनीले पुनः एकचोटी च्याम्पियन बन्ने प्रयास गर्नेछ । स्पेनको टोली पनि उत्तिकै राम्रो छ । क्वालिफायरमा ब्राजिल, फ्रान्स र पोर्चुगलले पनि उत्तिकै राम्रो गरेका छन् ।
इटाली र नेदरल्याण्ड्स जस्ता फुटबलका ठूला राष्ट्रहरूले यसपटकको विश्वकप छनोट पार गर्न नसक्दा तपाईलाई आश्चार्य लागेन ?
हो, यसै कुराले विश्वकप कति कठिन छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । इटाली बिनाको विश्वकप त कल्पनै गरिन्नथ्यो । अनि नेदरल्याण्ड्स भनेको त ब्राजिल ओलम्पिकको सेमिफाइनलमा पुगेको टोली हो । हामी उनीहरूलाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेका थियौं । रुस विश्वकपमा इटाली र स्वीजरल्याण्ड्सलाई धेरैले ‘मिस’ गर्नेछन् । उनीहरूका समर्थकले विश्वकपमा विशेष रौनक थप्ने गर्थे ।
विश्वकपमा स्थान पाउनु अर्जेन्टिनाका लागि पनि निकै मुस्किल रह्यो । इक्वेडरविरुद्ध तपाइँले ह्याट्रिक नगरेको भए त यो विश्वकप अर्जेन्टिनाले गुमाउने अवस्था थियो हैन ?
छनोटका सुरुवाती खेलहरूमा राम्रो प्रदर्शन राम्रो हुन नसकेपछि हामीलाई अन्तिम खेल(इक्वेडरविरुद्ध) जित्नैपर्ने थियो । त्यो खेलमा हामीले योजना बनाएअनुसार मैले ती गोलहरू गरेँ । टीमले गर्दा त्यो सम्भव भएको हो । हामी सबैमा अर्को विश्वकप खेल्ने ब्यग्रता थियो । विश्वकप नै अन्तिममा सबैको लक्ष्य हुन्छ । उक्त खेल जित्दै विश्वकपमा छनोट भएपछि हामी निकै खुशी भयौं । हामीलाई प्लेअफको तनाब पनि रहेन ।
क्रोयोसिया र अर्जेन्टिना एउटै समूहमा परेपछि क्रोयोसियाका इभान राकिटिक, जो बार्सिलोनामा तपाइँका सहकर्मी पनि हुन् । एउटै क्लबबाट खेलिरहेका साथीहरू विपक्षी भएर विश्वकपमा भिड्न लागेपछि तपाईसँग उनको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
त्यस्तो केही रहेन । इभान राम्रा खेलाडी हुनुका साथै समर्पित टीममेट पनि हुन् । उनी लडाकु खेलाडी पनि हुन् । उनीसँगको भिडन्तमा पक्कै उनले मलाई मेरो नेचुरल गेम खेल्न दिने छैनन् । तर, हाम्रा तर्फबाट पनि उनले त्यतिकै चुनौती पाउनेछन् । बार्सिलोनामा सँगै अभ्यास गर्दा हामीले केही मिठा पलहरूसँगै बिताएका छौं । खेलका बारेमा छलफल गरेका छौं । बस् त्यति हो ।
Posted in खेलकुद Tagged अर्जेन्टिना, लियोनल मेस्सी, विश्वकप
अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि पोखरा विमानस्थल अयोग्य